Argagixiso gaala oo weeraray Muslimiin ku jira masjid ku yaala Norway - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Argagixiso gaala oo weeraray Muslimiin ku jira masjid ku yaala Norway
Argagixiso gala oo booliiska dalkaasi Norway ku tilmaameen nin cadaana ayaa weerar ku qaaday masjid ku yaala caasimada oo lagu magacaabo Alnuur Masjid. Gaalkan argagixisada ah oo koobigareeyay gaalkii ka weynaa ee muslimiinta ku xasuuqay Niyuusiilan.
”Falkan ka dhacay masjidka waa fal argagixiso ayaa booliiska dalkaasi ku dhiiradey inay yiraahaan halka caadiyan dadka noocana ee gaalada ah lagu tilmaamo xagjir ama nin waalan.
Ninkan ayaa shalay casarkii xilli Muslimiintu tukanayaan salaadii casarka uu masjidka la soo galay bastoolad iyo qoriga garabka laga rido, wuxuuna bilaabay inuu toogto Muslimiinta.
Kadib oday 75 jira oo aad ku arkaysan sawirka sare ayaa si geesinimo isku duubey kana badbaadiyay inuu gaysto dhimasho badan. Odaygan ayaa waxa soo gaartey dhaawac fudud. Waxa goobta lagu arkay gawaadhida gurmadka iyo diyaarada helikobtarta oo dul heeheebaysa masjidka.
Meyd laga helay guriga argagixiska
Booliiska ayaa sheegay inay hayaan argagixiska falkan gaystey, waxayna sheegeen in baaritaan deg dega oo lagu sameeyay guriga uu degan yahay laga helay haweenay meyd ah.
Ninkan ayaa saxaafada qaar sheegayaan inuu ka mid yahay kuwa uu kiciyay xagjir Taram. Masjidkan Alnuur ayaa ah masaajidka kaliya e soo rogey in masjidka lagu galo kaadh aqoonsi kadib xasuuqii Niyuusiilan.
Sawirada hoose waa masjidka iyo booliis qumaati u galaya